Ganacsatada Iibsadayaashu way kala duwan yihiin! | Martech Zone
Talaado, Janaayo 13, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Qoraa-qoraa Bob Bly waxay soo bandhigtay liiska sababaha suuqgeynta ganacsiyada ay aad uga duwan tahay macaamiisha. Waxbaan ka qoray ujeeddo qoraalo hore, waxaanan aaminsanahay inay tani tahay tusaale weyn. The ujeeddo ganacsade iibsade waa mid gaar ah marka lala barbardhigo macaamiisha:
Ganacsade iibsade rabto inaad iibsato.
Ganacsadaha iibsaduhu waa mid casri ah.
Ganacsade iibsadaha ayaa aqrin doona nuqul badan.
Nidaam iibsi tallaabo-badan ah.
Saamayn badan oo iibsi ah.
Badeecadaha ganacsigu way ka dhib badan yihiin.
Ganacsadaha iibsadaha wuxuu wax ku iibsadaa faa iidada shirkadiisa? Iyo mid isaga u gaar ah.
Mr. Bly wuxuu si faahfaahsan uga hadlayaa mid kasta oo ka mid ah runtiina wuxuu ku sii ballaadhiyaa cabsida iyo dhiirrigelinta adeegsadaha ganacsiga! Ka fogaanshaha walbahaarka ama dhibaatada, cabsida aan la garanayn iyo cabsida luminta lahaanshaha ee hawsha ayaa ah qodobbada ugu muhiimsan ee maskaxda lagu hayo habka suuqgeynta iyo iibinta.
Haddii aad haysatid daqiiqado yar, hubi inaad akhriso maqaalka oo dhan oo ku saabsan 7 Farqiga u dhexeeya B2C iyo B2B Iibsadayaasha, Xeerarka iyo Dadku aad bay u kala duwan yihiin. Waxay kaa caawin kartaa inaad dib uga fikirto xeeladahaaga!
Tags: wadaagnoolaynjaMari Smithiibiso internetkaxawaare wordpressSuuqgeynta Xiriirka Cusubfariin muuqaal ahshir-jaraa'id
Boostada weyn - sidoo kale, iibsadaha ganacsiga badanaa waa la ogeysiiyaa oo ugu muhiimsan, iibsadaha ganacsigu wuu baahan yahay!
Jan 14, 2009 saacadu markay ahayd 2:04 PM
Macaamiishayadu waa shirkado tiknoolajiyad gaar ah B2B laakiin waxaan la kulannaa caqabado markaan iibinayno adeegyadeena, sida shirkad kasta oo kale, ha ahaadaan B2B ama B2C realms. Liiskan waxaa ku jira qodobo aad u fiican oo aan maskaxda ku hayno haddii aan dareemeyno jahwareer inta lagu jiro howlaha horumarinta ganacsiga; rajadayadu way ka duwan tahay shakhsiyaadka macaamiisha ah, qodob aan si fiican u garaneyno laakiin ma dhaawaceyso in la xusuusiyo markasta iyo mar kale. Waxaan rajeynayaa inaan aqriyo maqaalka oo dhan - waad ku mahadsan tahay tilmaanta.